Isiphelo Sonqulo Lobuxoki Sisemnyango! — IWatchtower LAYBRARI EKWI-INTANETHI
kn37 iphe. 1-4
Isiphelo Sonqulo Lobuxoki Sisemnyango!
Isiphelo Sonqulo Lobuxoki Sisemnyango
Unqulo Lobuxoki . . .
Unqulo Lokwenyaniso . . .
Ngaba Lonke Unqulo Luyamkholisa UThixo?Indlela Esa Kubomi Obungunaphakade—Ngaba Uyifumene?
Isigidimi Esiya Kulo Lonke Ihlabathi
▪ Luyintoni unqulo lobuxoki?
▪ Luya kuphela njani?
▪ Siya kukuchaphazela njani isiphelo salo?
Luyintoni unqulo lobuxoki?
Ngaba ukhathazwa lulwaphulo-mthetho olwenziwa egameni lonqulo? Ngaba iimfazwe, ubugrogrisi nokunganyaniseki kwabo bathi bakhonza uThixo kukwenza ungabi saqiniseka ngento ocinga ukuba ilungile? Kutheni kubonakala ngathi unqulo lusisizekabani sezi ngxaki?
Lunqulo lobuxoki kuphela olubekek’ ityala ngezi zinto. UYesu Kristu, oyena mnquli wayehlonelwa ngabo bonke, wathi lunqulo lobuxoki olubangela ukuba abantu benze izinto ezimbi, kanye njengokuba “umthi obolileyo uvelisa isiqhamo esingento yanto.” (Mateyu 7:15-17) Luhlobo luni lwesiqhamo esiveliswa lunqulo lobuxoki?
▪ LUGXUPHULEKA KWIIMFAZWE NEZOPOLITIKO: Ulindixesha iAsiaweek uthi: “EAsia nakwamanye amazwe iinkokeli ezilambele igunya ngendelelo zijija iimbono abanazo abantu ngonqulo ukwenzela iingenelo zazo.” Ngenxa yoku, lo lindixesha uthi: “Kubonakala ngathi eli hlabathi lijamelene nezaqunge.” Enye inkokeli eyaziwayo yaseUnited States yathi: “Ukuba nifuna abagrogrisi bayeke ukubulala, babulaleni.” Yathi kumele kwenziwe njani oku? “Babulaleni bonke egameni leNkosi.” IBhayibhile ithetha into eyahluke ngokupheleleyo kula mazwi ayo, ithi: “Ukuba umntu uthi: ‘Ndiyamthanda uThixo,’ kodwa abe emthiyile umzalwana wakhe, ulixoki.” (1 Yohane 4:20) UYesu wathi: “Qhubekani nizithanda iintshaba zenu.” (Mateyu 5:44) Zingaphi iicawa ozaziyo ezinamalungu asemfazweni?
▪ LUSASAZA IIMFUNDISO ZOBUXOKI: Iicawa ezininzi zifundisa ukuba umphefumlo okanye umoya uyinxalenye engabonakaliyo esemntwini ebangela ukuba aqhubeke ephila emva kokuba umzimba ufile. Zisebenzisa le mfundiso, uninzi lwezi cawa lufun’ imali aph’ ibikho kumalungu azo lusithi yeyokuthandazela imiphefumlo enyukileyo. Noko ke, iBhayibhile yona ifundisa into eyahluke ngokupheleleyo koku. Ithi, “Umphefumlo owonayo—kuya kufa wona.” (Hezekile 18:4) “Abaphilayo bayazi ukuba baya kufa, kodwa abafileyo, abazi nto konke konke.” (INtshumayeli 9:5) UYesu wafundisa ukuba abafileyo baya kuvuswa—nto leyo ebingenakwenziwa ukuba abantu bebenomphefumlo ongafiyo. (Yohane 11:11-25) Ngaba icawa yakho ifundisa ukuba umphefumlo awufi?
▪ LUKUQWABAZEL’ ILISO UKUZIPHATHA OKUBI NGOKWESINI: Kumazwe amaninzi, amaqela onqulo amisela abefundisi abangamafanasini aze abongoze urhulumente ukuba awamkele ngokusemthethweni umtshato wawo. Kwaneecawa ezikugxekayo ukuziphatha okubi ziye zakubetha ngoyaba ukuxhatshazwa kwabantwana ngokwesini ziinkokeli zazo. Kodwa yintoni efundiswa yiBhayibhile ngokuphathelele ukuziphatha okubi ngokwesini? Ayigwegwelezi, ithi: ‘Ningalahlekiswa. Abahenyuzi, nabanquli-zithixo, nabakrexezi, namadoda agcinelwe iinjongo ezingezozamvelo, namadoda alala namadoda akayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo.’ (1 Korinte 6:9, 10) Ngaba zikho iicawa ozaziyo ezikuqwabazel’ iliso ukuziphatha okubi ngokwesini?
Liyintoni ikamva leecawa ezivelisa iziqhamo ezibolileyo? UYesu walumkisa wenjenje: “Wonke umthi ongavelisi siqhamo sihle uyagawulwa uze uphoswe emlilweni.” (Mateyu 7:19) Ewe, unqulo lobuxoki luya kugawulwa luze lutshatyalaliswe! Kodwa kuya kwenzeka njani yaye nini oku? Impendulo ifumaneka kumbono ongokwesiprofeto okwincwadi yeBhayibhile yeSityhilelo, isahluko 17 nese-18.
Siya kuba yintoni isiphelo sonqulo lobuxoki?
Khawube nalo mfanekiso ngqondweni. Ihenyukazi lihleli phezu kwerhamncwa eloyikekayo. Eli rhamncwa lineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi. (ISityhilelo 17:1-4) Lifanekisela bani eli henyukazi? Liphembelela ‘ookumkani bomhlaba.’ Linxibe ezimfusa, lisebenzisa isiqhumiso yaye lisisinhanha. Ngaphezulu, ngenxa yokusebenzelana kwalo nemimoya, ‘lilahlekisa zonke iintlanga.’ (ISityhilelo 17:18; 18:12, 13, 23) IBhayibhile iyasinceda ukuze siqonde ukuba eli henyukazi lunqulo lwehlabathi lonke. Lifanekisela, kungekhona icawa enye kodwa zonke iicawa ezivelisa isiqhamo esibolileyo.
Irhamncwa ekuhleli ihenyukazi phezu kwalo lifanekisela oorhulumente behlabathi bezobupolitika.* (ISityhilelo 17:10-13) Unqulo lobuxoki luhleli phezu kweli rhamncwa lezobupolitika, lizama ukuphembelela izigqibo elizenzayo nendlela elimele lihambe ngayo.
Noko ke, kungekudala kuza kwenzeka into emangalisayo. “Iimpondo ezilishumi ozibonileyo, nerhamncwa, ngabo baya kulithiya ihenyukazi, baliphanzise, balihlube libe ze, bazidle iinxalenye zenyama yalo baze balitshise ngokupheleleyo ngomlilo.” (ISityhilelo 17:16) Ngephanyazo, oorhulumente behlabathi bezobupolitika baya kulujikela unqulo lobuxoki baze balutshabalalise kuthi nya! Yintoni eya kubabangela benze oku? Incwadi yeBhayibhile yeSityhilelo iyaphendula: “UThixo ubeke oko ezintliziyweni zabo ukuba baphumeze ingcamango yakhe.” (ISityhilelo 17:17) Ewe, uThixo uya kuluphendulisa unqulo lobuxoki ngazo zonke izinto ezicekisekayo oluzenza egameni lakhe. Ebonisa okusesikweni ngokugqibeleleyo, uya kusebenzisa izithandwa zalo zezobupolitika ukuba zilutshabalalise.
Yintoni omele uyenze ukuba akufuni kutshatyalaliswa nonqulo lobuxoki? Umthunywa kaThixo uyasibongoza: “Phumani kuyo, bantu bam.” (ISityhilelo 18:4) Ewe, eli lixesha lokuphuma kunqulo lobuxoki! Kodwa uza kuphuma uye phi? Ungazibandakanyi nabantu abangabukholelwayo ubukho bukaThixo, kuba nelabo ikamva limfiliba. (2 Tesalonika 1:6-9) Ekuphela kwendawo onokusabela kuyo lunqulo lokwenyaniso. Unokulubona njani unqulo lokwenyaniso?
Indlela onokulubona ngayo unqulo lokwenyaniso
Ziziphi iziqhamo ezihle olufanele luzivelise unqulo lokwenyaniso?—Mateyu 7:17.
▪ LUBONAKALA NGOTHANDO: Abanquli bokwenyaniso “abayonxalenye yehlabathi,” abahlukaniswa bubuhlanga okanye yindlela yokuphila yaye ‘banothando phakathi kwabo.’ (Yohane 13:35; 17:16; IZenzo 10:34, 35) Ababulalani kunoko bakulungele ukufelana.—1 Yohane 3:16.
▪ LUKHOLOSE NGELIZWI LIKATHIXO: Kunokuba lufundise ‘izithethe neemfundiso eziyimiyalelo yabantu,’ iimfundiso zonqulo lokwenyaniso zisekelwe kwiLizwi likaThixo, iBhayibhile. (Mateyu 15:6-9) Ngoba? Ngenxa yokuba “sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye siyingenelo ekufundiseni, ekohlwayeni, ekulungelelaniseni izinto.”—2 Timoti 3:16.
▪ LOMELEZA IINTSAPHO LUZE LUKHUTHAZE UKUPHILA NGEMILINGANISELO EPHAKAMILEYO: Unqulo lokwenyaniso luqeqesha amadoda ukuba “abathande abafazi bawo njengemizimba yawo,” lunceda abafazi ukuba babe ‘nentlonelo enzulu ngamadoda abo,’ yaye lufundisa abantwana ukuba ‘bathobele abazali babo.’ (Efese 5:28, 33; 6:1) Ukongezelela, abo banikwe imbopheleleko bamele babe yimizekelo.—1 Timoti 3:1-10.
Ngaba lukho unqulo oluyifikelelayo le milinganiselo? Incwadi ethi Holocaust Politics, eyapapashwa ngowama-2001, ithi: “Ukuba nabanye abantu bebephila ngokuvisisana nemilinganiselo efundiswa ngamaNgqina kaYehova naphila ngayo, isiganeko sokuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo ngesasingazange senzeke yaye ukubulawa kohlanga bekungayi kuqhubeka kugqugqise ihlabathi.”
Eneneni, kumazwe angama-235, amaNgqina kaYehova akaneli nje kukufundisa abanye ngemilinganiselo yeBhayibhile—kodwa aphila ngayo. Siyakubongoza ukuba ucele amaNgqina kaYehova akuncede ufunde ngoko kufunwa nguThixo ukuze ukwazi ukumnqula ngendlela eyamkelekileyo kuye. Yenjenjalo ngoku. Musa ukuphozis’ amaseko. Isiphelo sonqulo lobuxoki sisemnyango!—Zefaniya 2:2, 3.
Ukuba ufuna inkcazelo engakumbi ephathelele isigidimi esisekelwe eBhayibhileni esishunyayelwa ngamaNgqina kaYehova, nceda uqhagamshelane nawo kwiadresi eboniswe ngezantsi.
□ Ndicela incwadana enemifanekiso ethi Hlalani Nilindile!
□ Ncedani niqhagamshelane nam ngokuphathelele isifundo seBhayibhile sesisa.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngalo mbandela, funda incwadi ethi ISithyilelo—Incopho Yaso Ezukileyo Isondele! epapashwe ngamaNgqina kaYehova.
[Amagama acatshulweyo akwiphepha 3]
Unqulo lobuxoki luphembelela ‘ookumkani bomhlaba’
“Phumani kuyo, bantu bam”